MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardfaqs VAS mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT ၏ standard ring back tone များကို သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော တေးသွားများဖြင့် အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ…
MPT သို့ 7979 ဟု ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်၍ Ring Tune service ကို ရယူနိုင်ပါသည်။
SMS ပေးပို့၍ရယူရန် – လစဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန်အတွက် 7979 သို့ REG M ၊ အပတ်စဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန်အတွက် 7979 သို့ REG W ၊ နေ့စဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန်အတွက် 7979 သို့ REG D ဟု SMS ပေးပို့၍ ရယူနိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ်) နေ့စဉ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု နဲ့ သီချင်း ဝန်ဆောင်မှုအတွက် 7979 သို့ REG SS ဟု ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
လူကြီးမင်း ဝယ်ယူလိုသော သီချင်းကုဒ် နံပါတ်အား buy <tuneID> ဟု SMS ပေးပို့၍ ရယူနိုင်ပါသည်။ Example: buy 0001110010
*7979# သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ ကြိုက်နှစ်သက်သော တေးသီချင်း များအားလည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
လစဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု အတွက် တစ်လ (ရက် ၃၀)စာအတွက် (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း) ၁၀၅၀ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
အပတ်စဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု အတွက် တစ်ပတ် (၇ ရက်)စာအတွက် (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း) ၃၀၀ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
နေ့စဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု အတွက် တစ်ရက်စာအတွက် (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း) ၄၇ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
သီချင်း တစ်ပုဒ်လျှင် ရက်(၃၀)စာ အတွက် (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း) ၃၁၅ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
နေ့စဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု အတွက် တစ်ရက်လျှင် ၄၇ ကျပ် ကျသင့်ပြီး သီချင်း တစ်ပုဒ်လျှင် ၁၃ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
7979 သို့ အခမဲ့ ခေါ်ဆို၍ အကူအညီပေးရန်သို့ သွားရောက်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုအား ပယ်ဖျက်ရန်ကို နှိပ်ပါ။ (သို့မဟုတ်)
7979 သို့ UNR ဟု SMS ပေးပို့ပါ။ (သို့မဟုတ်)
MPT4U APP ပေါ်မှ CRBT ပယ်ဖျက်ရန် ကို ရွေးချယ်ပါ။ (သို့မဟုတ်)
*7979# သို့ဖုန်းခေါ်ဆို၍ ဝန်ဆောင်မှုဖျက်သိမ်းမည်အား ရွေးချယ်ပြီး ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်)
106 customer care IVR သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ဝန်ဆောင်မှုအား ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
7979 သို့ (အခမဲ့) ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီ: လမ်းညွန်ချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
7979 သို့ အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ လမ်းညွှန်ချက်များ အတိုင်း လုပ်ဆောင်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်)
*7979# ဟု ရိုက်နှိပ်ပြီး လည်း ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
7979 ကို ဖုန်းခေါ်ဆို၍ အကောင့်ချိန်ညှိရန် သို့ သွားရောက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ကို စစ်ဆေးရန် သို့ ဝင်ရောက်၍ သီချင်း ကို ပယ်ဖျက်ရန် ကို ရွေးပါ။ (သို့မဟုတ်)
Del <songcode> ဟု ရိုက်နှိပ်၍ 7979 သို့ SMS ပေးပို့ပါ။ Example: Del 0001110010 (သို့မဟုတ်)
106 customer care IVR သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို ၍ သီချင်းအား ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ လူကြီးမင်းလက်ဆောင် ပေးလိုသောသူမှာ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူထားပြီးသူ ဖြစ်ပါက သီချင်း အတွက် ပထမ တစ်လစာ ဝန်ဆောင်မှု ၃၁၅ ကျပ်အား လူကြီးမင်းထံမှ ကျသင့်ပြီး နောက်လများမှ စ၍ သီချင်းလက်ဆောင် လက်ခံရရှိသောသူထံမှ ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သီချင်း လက်ဆောင်ပေးလိုသောသူမှာ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှု အား ရယူထားခြင်း မရှိပါက Ring Tune ဝန်ဆောင်မှု ပထမ ရက်(၃၀)စာ အတွက် ၁၀၅၀ကျပ် နှင့် သီချင်းအတွက် ရက် ၃၀ စာ ဝန်ဆောင်ခ ၃၁၅ ကျပ် အား လူကြီးမင်းထံမှ ကျသင့်ပါမည်။ နောက်လများမှ စ၍ Ring Tune ဝန်ဆောင်ခ ၁၀၅၀ ကျပ်နှင့် သီချင်း အတွက် ဝန်ဆောင်ခ ၃၁၅ ကျပ်အား လက်ဆောင်လက်ခံရရှိသူထံမှ ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
SMS ပေးပို့ရန် – လစဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန် REG M ဟု SMS ပေးပို့ခြင်း၊ အပတ်စဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန် REG W ဟု SMS ပေးပို့ခြင်း၊ နေ့စဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန် REG D ဟု 7979 သို့ SMS ပေးပို့၍ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်)
ပိုမိုသိရှိရန် 106 ကို ဖုန်းခေါ်ဆို၍ Name Tune ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူနိုင်ပါသည်။
လစဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု အတွက် တစ်လ ရက်၃၀စာ အတွက် (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း)၁၀၅၀ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
Name Tune တစ်ပုဒ် အတွက် ရက်၃၀ စာ (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း )၃၁၅ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
၁၆။ နေ့စဉ်ပေး ဝန်ဆောင်မှုနှင့် သီချင်းကို ဘယ်လိုရယူနိုင်မှာလဲ။
IVR: 7979 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ၊ ထို့နောက်နေ့စဉ်ပေး ဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ပါ
၁၇။ နေ့စဉ်ပေး ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ သီချင်းဝန်ဆောင်မှု ကို ရယူပြီးနောက် သီချင်းအသစ် ကို ထပ်မံရယူပါက သီချင်းဝန်ဆောင်ခ ဘယ်လောက် ကျသင့်မှာလဲ။
သီချင်း အသစ် တစ်ပုဒ် ရယူတိုင်း သီချင်းဝန်ဆောင်ခ တစ်ရက်အတွက် ၁၃ ကျပ်ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
IVR၊ SMS၊ USSD၊ ၁၀၆ များမှ သီချင်းများကို ရယူနိုင်ပြီး သီချင်းဝန်ဆောင်ခ တစ်ရက်အတွက် ၁၃ ကျပ်ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၈။ * Copy ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲ။
CRBT ဝန်ဆောင်မှုကို လက်ရှိအသုံးပြုထားသူထံသို့ CRBT ဝန်ဆောင်မှု အသုံးမပြုထားသူမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုသောအခါ * ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် CRBT Ring Tune ဝန်ဆောင်မှုကို အလွယ်တကူရယူနိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။
၁၉။ CRBT ဝန်ဆောင်မှုကို *Copy ဖြင့် ဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ။
ဖုန်းခေါ်ဆိုသူမှ CRBT ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူထားသူထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုသောအခါ ၃ စက္ကန့်မှ ၄ စက္ကန့်ကြားတွင် တေးသွားကိုရယူရန် * ကိုနှိပ်ပါ၊ ဟု စတင်ကြားရမှာ ဖြစ်ပြီး ထို့နောက်တွင် CRBT တေးသွားကို စတင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။
ခေါ်ဆိုသူသည် CRBT ရယူထားသူထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုနေစဉ်အတွင်း * ကို နှိပ်၍ ထိုတေးသွားကိုရယူနိုင်သည်။
တေးသွားကိုကြားနေရသည့် အချိန်အတွင်းတွင်သာ * ကိုနှိပ်၍ တေးသွားကို ရယူနိုင်သည်။
CRBT ရယူထားသူ/ခေါ်ဆိုသူထံသို့ ဖုန်းဝင်သွားသောအခါ * ကိုနှိပ်သော်လည်း မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်မှ လုပ်ဆောင်မည် မဟုတ်ပါ။
၂၀။ CRBT ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူထားခြင်းမရှိသူများအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ဘယ်လောက်ကျသင့်ပါသလဲ။
ဝန်ဆောင်ခအတွက် တစ်ရက်လျှင် ၄၇ ကျပ်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး တေးသွားအတွက် တစ်ရက်လျှင် ၁၃ ကျပ်ကျသင့်မည်ဖြစ်မည်။
၂၁။ CRBT ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူများအတွက် တေးသွားတစ်ပုဒ် ဒေါင်းလော့ လုပ်ခြင်းအတွက် ဘယ်လောက်ကျသင့်ပါသလဲ။
အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည် လစဉ်/အပတ်စဉ်/ နေ့စဉ် အစီအစဉ်ကို (တေးသီချင်း တစ်လစာဖြင့်) ရယူထားပါက တစ်လလျှင် ၃၁၅ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည် နေ့စဉ်အစီအစဉ်ကို (တေးသီချင်း တစ်နေ့စာဖြင့်) ရယူထားပါက တစ်နေ့လျှင် ၁၃ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
၂၂။ CRBT ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုနေစဉ်အတွင်း * Copy ကို မကြားလိုလျှင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ။
Customer Care သို့ ဆက်သွယ်၍ Blacklisting အတွက် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၄၈ နာရီအတွင်း လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
၂၃။ ကျွနုပ်ထံသို့ ဖုန်းခေါ်သူများ ဖုန်းခေါ်ဆိုနေစဉ်အတွင်း * Copy ကို မကြားစေလိုလျှင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ။
၁။ အကြိုက်ပို့ အစီအစဉ်ဆိုတာဘာလဲ။
အကြိုက်ပို့ ဆိုသည်မှာ MPT မှ ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများနဲ့ ပိုမိုဆက်သွယ်နိုင်ရန် သက်သာသောနှုန်းထားဖြင့် MPT အချင်းချင်း SMS များ စိတ်ကြိုက်ပေးပို့နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတဲ့ အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါသည်။
ဈေးနှုန်း (ကုန်သွယ်ခွန် ပါဝင်ပြီး)
၂၄ နာရီ ပက်ကေ့ချ် ၁၉၈ ကျပ် ၂၄ နာရီ ၁,၀၀၀ *2427*1#
ပက်ကေ့ချ် ၄၉၈ ကျပ် ၇ ရက် ၅,၀၀၀ *2427*2#
၃။ အစီအစဉ်ကို မည်သူတွေဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ?
MPT GSM/WCDMA prepaid [ဆွေသဟာ(သို့မဟုတ်)ရှယ်ပြော(သို့မဟုတ်)ရွှေစကား] အသုံးပြုနေသူများအားလုံး ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ CDMA, Postpaid, Base Tariff နှင့် လက်ရှိအသုံးပြုခြင်း မရှိသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
*2427# သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း၊ MPT4U App (သို့မဟုတ်) MPT Pay မှလည်းကောင်း၊ နီးစပ်ရာ MPT အရောင်းဆိုင်များမှတဆင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ပက်ကေ့ချ်ဈေးနှုန်းများမှာ အခွန် ၅% ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
*224# သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း(သို့မဟုတ်) MPT4U App မှတဆင့်လည်းကောင်း စစ်ဆေး ကြည့်နိုင်ပါသည်။
၇။ အကြိုက်ပို့ ပက်ကေ့ချ်ကို အကြိမ်ရေ ဘယ်လောက်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
အကြိုက်ပို့ ပက်ကေ့ချ်ကို အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။အကြိုက်ပို့ ၇ ရက် ပက်ကေ့ချ်၏ သက်တမ်းမကုန်ခင် တူညီသော ပက်ကေ့ချ်ထပ်မံဝယ်ယူပါက ပက်ကေ့ချ်များ၏ SMS များ ကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင် အရှည်ဆုံး ပက်ကေ့ချ်၏ သက်တမ်းအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အကြိုက်ပို့ ၂၄ နာရီ ပက်ကေ့ချ်သည် သက်တမ်းမကုန်ခင် တူညီသော ပက်ကေ့ချ်ထပ်မံဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ပက်ကေ့ချ်အချင်းချင်း ပေါင်းစည်း၍ သက်တမ်းတိုးမည်မဟုတ်ဘဲ သီးခြား အကြိုက်ပို့ ၂၄ နာရီ ပက်ကေ့ချ် များအနေဖြင့်သာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ပက်ကေ့ချ် တစ်ခုချင်းစီ၏ သက်တမ်းကို ၂၄ နာရီအပြည့်အဝ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၈။ ပက်ကေ့ချ် ရဲ့ expire date ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်မှာလဲ?
၂၄နာရီ ပက်ကေ့ချ် ရဲ့ သက်တမ်း ကို real time date ဖြင့် သတ်မှတ်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ပက်ကေ့ချ် သက်တမ်းကို ၂၄ နာရီ အပြည့်အဝ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ဥပမာ-ဧပြီလ (၂၈)ရက်နေ့ရဲ့ မနက်၁၀နာရီမှာ ဝယ်ရင် ဧပြီလ (၂၉)ရက်နေ့ မနက် ၁၀နာရီမှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါသည်။
၇ ရက် ပက်ကေ့ချ် ရဲ့ သက်တမ်း ကို calendar date ဖြင့် သတ်မှတ်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ-ဧပြီလ (၂၈)ရက်နေ့ရဲ့ မနက်၁၀နာရီမှာ ဝယ်ရင် မေလ (၄) ရက်နေ့ ည ၁၂ နာရီ မှာ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၉။ အကြိုက်ပို့ ပက်ကေ့ချ်များကို ဝယ်ယူပြီး ထိပေါက် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်။ မည်သည့် channel မှမဆို အကြိုက်ပို့ ပက်ကေ့ချ်များကိုဝယ်ယူပြီး ထိပေါက် chance (၁) ခုရရှိကာ MPT4U တွင် ထိပေါက်ကစားပြီး ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၁၀။ အကြိုက်ပို့ ပက်ကေ့ချ်ကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ရပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်။ အကြိုက်ပို့ ပက်ကေ့ချ်များကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလိုပါက MPT4U App မှတစ်ဆင့် (သို့) *2427# မှတစ်ဆင့် အမှတ်စဉ် “2. Gift (သို့) 2. လက်ဆောင်ပေးမည်” ကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးမည့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၁၁။ ပရိုမိုးရှင်းကာလ ဘယ်အချိန်အထိလဲ။
ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အထိ ဖြစ်ပါတယ်။
1. Call Waiting Service ဆိုတာဘာလဲ?
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဖုန်းပြောနေစဉ် အချိန်အတွင်းတွင် အခြား အရေးကြီးဖုန်းများ ထပ်မံဝင်ရောက်လာပါက မိမိလက်ရှိပြောနေသည့် ဖုန်းကို စိုင်းငံ့နိုင်ပြီး ခေါ်ဆိုမှုအသစ်များကို ထပ်မံ လက်ခံနိုင်မည့် ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
1331 သို့ “ CW” ဟု
1331 သို့ “ CW OFF” ဟု
ဖုန်းပြောနေစဉ် နောက်ထပ် ခေါ်ဆိုသူရှိပါက အသိပေးအချက်ပြသံကို ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်တွင် လက်ရှိ ဖုန်းပြောနေသူနှင့် ခေတ္တစိုင်းငံ့ပြီး နောက်ခေါ်သူနှင့် ပြောင်းပြောခြင်း၊ ဖုန်းခေါ်မှုနှစ်ခုထဲမှ တစ်ခုကို ရပ်နားနိုင်ပါတယ်။
ပထမပြောနေသူ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ကိုင်ထားသ၍ ပြန်လည် ပြောင်းလဲ ပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ထဲတွင် ဖုန်းခေါ်သူ တစ်ယောက်သာ စောင့်စရာလိုပါမယ်။
1331 သို့ “ VMS” ဟု
1331 သို့ “ VMS OFF” ဟု
သုံးစွဲသူမှာ လတ်တလော ဆက်သွယ်၍ မရနိုင်လျှင်ဖြစ်စေ ဖုံးပိတ်ထားလျှင်ဖြစ်စေ
ခေါ်ဆိုသူအနေဖြင့် အသံ Message ချန်ထားနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှု
1. Conference Call ဆိုတာဘာလဲ။
Conference Call ဆိုတာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ကြိမ်အတွင်း (initiator အပါအဝင်) ဖုန်းနံပါတ် ခြောက်ခုအထိ တပြိုင်တည်းဖုန်ခေါ်ပြီး ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်အောင် အထောက်အပံ့ပေးထားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။
အမ်ပီတီရဲ့ Conference Call ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု တစ်ကြိမ်အတွင်းမှာ ဖုန်းနံပါတ် အများကြီးကိုခေါ်ပြီး ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ပါပြီ။
2. Conference Call ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ။
1331 သို့ “ CC” ဟု
1331 သို့ “ CC OFF” ဟု
3. Conference Call ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရပါသလဲ။
ပထမဦးဆုံး ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို အရင်ခေါ်ရမှာပါ။ ပြီးရင် Add Call ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး တခြားဖုန်းနံပါတ်တွေ (၅ခု အထိ) ထပ်ခေါ်ရမှာပါ။
ပြီးရင် Merge Call ကိုနှိပ်ပြီး ခေါ်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်အားလုံးနဲ့ တပြိုင်တည်း ဖုန်းပြောနိုင်ပါတယ်။
1 . Call Me Back ဆိုတာ ဘာလဲ?
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိမိကို ပြန်လည်ခေါ်ဆိုစေချင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်ကို *222# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် သိရှိစေနိုင်မည့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
CALL ME BACK” ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုရန်
*222* မိမိအား ပြန်လည်ခေါ်ဆို စေလိုသည့် ဖုန်းနံပါတ်#[send]
ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီးသော် မိမိပြန်လည်ခေါ်စေလိုသည့် နံပါတ်တွင် အောက်ပါ Message ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
“မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ 09XXXXXXXXX ကို ယခုပြန်လည်ခေါ်ဆိုပေးပါ။”
1. Call Forwarding ဆိုတာဘာလဲ?
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့် လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသည့် အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများကို
အခြား မိမိလက်ခံနိုင်မည့် ဖုန်းနံပါတ်ထဲသို့ အလိုအလျောက် လွှဲပေးသည့် ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။
1331 သို့ “ CF” ဟု
1331 သို့ “ CF OFF” ဟု
သုံးစွဲသူအနေနဲ့ လတ်တလော လက်ခံနိုင်ခြင်း မရှိသည့် အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများအား
သုံးစွဲသူ လွှဲပေးစေလိုသည့် အခြား ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုသို့ လွှဲပေးခြင်း